Ireo takelaka bilaogy 5 mahaliana indrindra: ny antony maha-zava-dehibe azy ireo | Famoronana an-tserasera
Ny dokam-barotra ankehitriny dia manan-danja na manan-danja kokoa noho ny vokatra ihany. Raha ny tena izy, raha tsy mitondra tetika dokam-barotra ny vokatra iray, na tsara, azo ampiharina ary na ohatrinona aza ny vahaolana amin'ny olan'ny mpampiasa dia tsy hamidy izy io. Ary misy antony tsotra: tsy hitan'ny mpampiasa izany. Noho io antony io, ny fampiasana dokam-barotra amin'ny magazine, takelaka (raha manana vola ampy hividianana toerana ianao), na dokambarotra amin'ny Internet dia vahaolana efa be mpampiasa kokoa.
Manokana, takelaka mifanitsy amin'ilay antsoina hoe doka nentim-paharazana, saingy mbola mahomby ihany izy ireo amin'ny heviny fa miseho ny tenany rehefa mivoaka amin'ny arabe ianao, rehefa mitondra fiara sns. Ary, na tianao izany na tsia, dia mahatsikaritra azy io, izay mahatonga ny sainao hahatsiaro ireo vokatra ireo ary mety hitarika anao hividy azy ireo mihitsy aza.
1 Inona avy ireo takelaka fanaovana takelaka
2 Ireo takelaka fanaovana famoronana sy mahomby indrindra teo amin'ny tantara
2.1 Fampielezan-kevitr'i IKEA's JOY
2.2 Ny fampielezana ny zotom-po
2.3 Miaraka amin'ny 3D effects
2.4 Takela-by izay milanja lanja
2.5 Ny takelaka misy valiny aminao
Inona avy ireo takelaka fanaovana takelaka
Ny takelaka bileta dia rafitra iray, mazàna lehibe, izay amboarina ety ivelany, indrindra amin'ny toerana hita maso tsara, ary toerana anaovana dokam-barotra marika ho an'ireo mpampiasa izay mijanona ao amin'io faritra io mahita azy ireo. Ny tena fiasan'ity fitaovana ity dia tsy iza fa ny fampahafantarana ny vokatra na fampahalalana mety hahaliana ny olona. Ohatra, ny fanambaràna vokatra marika vaovao, na fampahalalana manokana izay tsy maintsy raisina. Izy io koa dia miasa ho an'ny orinasa hanao dokam-barotra, manome ny mombamomba ny fifandraisana mba hahafantaran'izy ireo.
Ireo dokam-barotra apetraka amin'ireo fefy ireo dia mazàna vita amin'ny fitaovana samihafa, ny lamba canvas na lamba matetika (vy, lamba sns.). Ny taratasy koa dia azo ampiasaina. Na izany aza, efa elaela ihany dia misy fitaovana hafa avela hitaky ny filazany, ary izay hisarika ny sain'izay mahita azy, satria izay tadiavina dia ny fanaovana akony. Araka izany, ny écran électricité, ny plastika, ny fefy feo, na ireo manala fofona aza, no tena manavao.
Raha ny habe dia tsy kely ireo. Ny mahazatra indrindra dia refesina amin'ny 4 × 3 metatra raha ny lehibe indrindra dia 16 × 3 metatra. Ankehitriny, ny mahazatra dia 8 × 3 metatra, miaraka amin'ny velaran'ny 24 metatra toradroa.
Voaporofo fa mahazo tombony lehibe amin'ny doka ny takelaka fanaovana dokambarotra, toy ny fahazotoana 24 ora isan'andro, isan'andro isan'andro, ny fananana mpihaino kendrena (miankina amin'ny faritra misy ny takelaby), sns. Saingy tsy tokony hohadinointsika ireo fihemorana, toy ny tsy fahafahantsika mametraka azy ireo amin'ny toerana rehetra na ny fahaiza-mamorona ilaina mba hamoronana valiny izay tena mahatratra ny taha avo indrindra (olona maniry ny vokatra, mifanerasera amin'ny ny orinasa, tsidiho ny tranokala ...).
Noho izany, zava-dehibe ny miavaka. Izay no antony, etsy ambany, hanome anao ohatra vitsivitsy nahatratra izany izahay.
Ireo takelaka fanaovana famoronana sy mahomby indrindra teo amin'ny tantara
Koa satria tsy te ho tavela amin'ny zavatra "teôlôjiana" fotsiny isika, tonga ny fotoana hiarahana aminao lisitr'ireo takelaka heverina ho mamorona sy manaitra, ary nahitana vokatra be. Miaraka amin'izany tsy vitan'ny hoe hahatratra ny tanjonao ianao, izay mety mivarotra ireo vokatra na mamorona marika orinasa, fa koa fantatry ny mpampiasa anao ary fantany izay azonao atolotra.
Ankehitriny, iza ireo miavaka amin'ny ambiny?
Fampielezan-kevitr'i IKEA's JOY
Mahavariana tokoa ilay teny hoe FALY. Saingy amin'ny takelaka fanoratana dia mety tsy izany. Ary mazava ho azy, tsy maintsy mamorona zavatra izay tena mila jerena indroa ianao. Izay angamba no noheverin'i Ikea hamorona fefy miteny ho azy.
Amin'ny lafiny iray, miavaka tsara ilay teny. SAINGY raha mijery kely kokoa ianao dia ho tsapanao fa vita amin'ny fanaka daholo izany teny izany ary eny, koa ny olona. Raha ny marina, hanana sofa ianao, latabatra fisakafoana ary sombin-javatra iray hafa misy olona roa.
Ny fampielezana ny zotom-po
Rehefa mila mampiasa kasety (na fixo) ianao hanidiana fonosana na boaty iray, ny fahita indrindra dia ny manapaka sombin-javatra vitsivitsy. Ary avelao hifanintona ilay zavatra sao mila bebe kokoa ianao. Izany no namboarin'izy ireo teo amin'ity takelaka ity. Iray amin'ireo takelaka fisoratana anarana io asehon'izy ireo isan'andro, izany no mahatonga ny sary mijanona matetika. Ary koa, raha mieritreritra ianao fa tsy misy sary mazava, satria tsy hita ny marika dia jereo indray. Izany dia ao anatin'ny zotom-po, izay tafiditra ao anatin'ny "dokambarotra ankolaka." Manolotra valiny tena tsara izany (satria tsy hitanao mivantana loatra ary noho izany dia tsy lavinao).
Miaraka amin'ny 3D effects
Fefy toa manana fiainany manokana ihany koa no ankasitrahana indrindra ankehitriny. Ary zavatra tokony hoheverinao izany rehefa mitady famoronana. Ary izany ve ny zava-misy amin'ny zava-misy, ny fisarihana ny saina hisaina fa tsy fefy io fa zavatra tena izy, dia misarika ny saina betsaka kokoa.
Raha ny marina dia afaka manome ohatra vitsivitsy hafa toa izany izahay.
Takela-by izay milanja lanja
Amin'ity tranga ity, na dia tena zava-misy aza izy io mety handratra ny fahatsapan'ny vondrona sasany (ary mety hiteraka fanesoana mihitsy aza). Saingy tsy azontsika lavina fa tsy misy fiatraikany. Satria na dia tsotra be aza ny hafatra dia ny endrik'ilay lehilahy manana kilao fanampiny fanampiny izay mampifantoka ny mason'io lafiny io. Toa mavesatra loatra ilay fanoharana, ka mampiakatra ny fefy amin'ny toerany. Ary mazava ho azy, mivantana ny hafatra: fanampiana mba tsy hitrangan'izany.
Ny takelaka misy valiny aminao
Alao sary an-tsaina hoe nandalo fefy iray misy jiro ianao. Na izany aza, rehefa manatona azy ianao dia mirehitra ny jiro, toy ny hoe manana hevitra ianao. Ity hevitra tena mamorona ity dia tsy manome ny marika ny dokambarotra ilainy fotsiny. Araka ny hitanao dia mazava izany, saingy amin'ny lafiny kely satria ny "hevitra" no tena zava-dehibe. Ny zava-dehibe dia ny fikatsahanao fifandraisana amin'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ireo takelaka bilaogy 5 mahaliana indrindra
Inona ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator sy ny fomba fiasan'izy io